N'ogbe Office oche Model P005 emeputa na Supplier |Ụba abụọ
Agba:Black + Blue / Black + Red
ERGONOMIC DESIGN: oche ụlọ ọrụ ejiri rụọ ọrụ ergonomic.Oche anyị na-egwu egwuregwu nwere ohiri isi nke mbughari na akwa lumbar na-enye nkwado olu gị na úkwù gị mgbe ị zuru ike na ya.Ọ na-egosipụtakwa ọnọdụ mkpọchi dị iche iche.
ỌTỤTỤ ỌTỤTỤ: Ịdị elu na-agbanwe agbanwe, azụ azụ na usoro mkpuchi mkpuchi iji kpọchie azụ n'akụkụ ọ bụla ruo 135 °;Enwere ike idozi ogwe aka sara mbara.A na-akwado oche onye isi na nkwado lumbar na-agbanwe agbanwe na ohiri isi iji chebe ọkpụkpụ gị na olu gị. Ogwe aka na-agbanwe agbanwe na-enye ohere dị mma maka ogwe aka gị.
Ngwa obosara: oche ụlọ ọrụ ịgba ọsọ bụ ezigbo oche nhọrọ maka ịrụ ọrụ, mmụta na egwuregwu.Ọ ga-eme ka oghere gị bụrụ nke ọgbara ọhụrụ na nke mara mma, ma mee ka ahụ gị dịkwuo mma.
Nke gara aga: Ihe Nlereanya Economy oche 1709-O
Osote: R udi aluminum ụkwụ egwuregwu oche ihe nlereanya FM-JX-R